iMove yatove inotsigira iyo HEVC fomati ye macOS Yakakwira Sierra | Ndinobva mac
Chimwe chezvinhu zvitsva izvo Apple zvakazivisa kumusangano wekupedzisira wevagadziri asi izvo zvakazoita kunge zvisingaonekwe yaive vhidhiyo nyowani uye mafoto ekurekodha mafomati EVS uye HEVC. Uye ini ndinoti vakaenda vasina kucherechedzwa nekuti kusvika mazuva mashoma apfuura, mafomati matsva aya anga asina kukwanisa kutiratidza zvese zvakanaka zvakataurwa naApple. Aya mafomati matsva anodzvinyirira mavhidhiyo nemifananidzo pasina kurasikirwa kwehunhu, achigara chinenge hafu yezvavave kusvika zvino. Sezvazviri zvine musoro nekutangwa kweiyo fomati nyowani, zvishoma nezvishoma mashandisiro inofanira kuvandudzwa kuti ienderane nayo uye wekutanga kuzviita aive iMovie, Apple vhidhiyo mupepeti.
Nokuburitswa kweyekupedzisira vhezheni yeMacOS High Sierra, Apple yatora mukana wekuburitsa yekuvandudza yeiyo vhidhiyo mupepeti wakapihwa mahara kune vese vashandisi veApple: iMovie. Nedzidzo iyi, iMovie inotora vhezheni 10.1.7 ichipa kuenderana nemavhidhiyo matsva mune HEVC fomati yeMacOS High Sierra. Vese vashandisi vanonakidzwa neIOS 11 vakatofanira kumirira kuvhurwa kweMacOS High Sierra kuti vakwanise kugadzirisa mavhidhiyo mune iyi fomati zvakananga vasina kuita shanduko mukuita.
HEVC, inozivikanwawo seH.265, inodimbura nzvimbo inogarwa nemavhidhiyo mune H.264 fomati kusvika hafu, fomati inoshandiswa neApple pane zvese zviyero uye mapuratifomu kusvika parizvino, uye izvo zvicharamba zvichishandiswa kubvira sarudzo yekurekodha mavhidhiyo mumhando yeHEVC inongowanikwa kubva ku iPhone 7 zvichienda mberi. Mac mhando dzinotengeswa mukati megore rino dzinogona kutamba zvirimo zve4K zvakagadzirwa mune iyi fomati nekumhanyisa Hardware. Pakati pegore ra2015 uye apfuura mamodheru, ini ndinogona chete kutamba mavhidhiyo akanyorwa mune iyi fomati pane resolution isina kukwira kupfuura 1080 pa240 fps.
iMovie inoda macOS 10.2.2 kana gare gareInoda 2,14 GB yenzvimbo pane yedu hard drive uye inowanikwa muSpanish, kuwedzera kune mimwe mitauro. Sezvandambotaura pamusoro apa, iMovie inowanikwa mahara kune vese vashandisi vane Apple ID, kunyangwe kana vasina kuvandudza mudziyo wavo mumakore apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » iMove ikozvino inotsigira iyo HEVC fomati yeMacOS Yakakwira Sierra
Isa mapikicha ako pane chikafu nePhoto Saizi Optimizer, ikozvino iri kutengeswa
Bhurawuza nenzira yaunoda ne Safari "marongero ewebsite ino" ye macOS High Sierra